Ny rindranasa 5 tsara indrindra hihainoana podcast amin'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana tsara indrindra hihainoana podcast amin'ny Android
Isak'izao mihetsika izao betsaka kokoa ny telefaona Android tsy manana FM Radio tafiditra ao. Zavatra tsy tian'ny mpampiasa maro izany. Soa ihany fa tsy mila radio handrenesana ireo onjam-peo ankafizinay izahay. Araka ny Manana safidy hafa koa isika ankehitriny, toy ny podcast. Amin'izany fomba izany dia afaka mihaino onjam-peo amin'ny fangatahana amin'ny finday Android isika.
Ny podscast dia revolisiona teo amin'ny tsena ary mitombo hatrany ny lazany. Satria afaka misintona programa radio amin'ny telefaona isika ary mihaino azy ireo isaky ny maniry izany isika. Misy be dia be rindranasa ahafahantsika mihaino podcast amin'ny Android. Ity misy safidy iray amin'ireo tsara indrindra.
Raha miditra amin'ny Play Store isika dia mahita fa be ny fampiharana podcast ho an'ny Android. Zavatra manasarotra ny misafidy iray hapetraka. Noho izany, mba hahamora kokoa ity fizotranao ity dia avelanay ianao amin'izany lisitry ny tsara indrindra misy ankehitriny. Vonona ny hihaona amin'izy ireo?
2 Radio iVoox sy Podcast
3 Pocket Mandroaka
Iray amin'ireo fampiharana an'io karazana io malaza indrindra Inona no mety ho hitantsika Raha ny marina dia io no alaina indrindra ao amin'ny Google Play. afaka henoy mivantana ireo onjam-peo maherin'ny 100.000. Ho fanampin'izay, manana a fisafidianana podcast goavambe ao amin'ny fampiharana. An-tapitrisany no misy. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manasokajy ny atiny amin'ny sokajy. Tena mety aminao ny mahita izay tadiavinao.
La maimaim-poana ny fampidinana ny fampiharana amin'ny Android. Na izany aza, mahita fiantsenana ao anatiny izahay.
TuneIn Radio: vaovao, mozika, podcast, radio fm
Radio iVoox sy Podcast
Safidy izay mankafy laza be eo amin'ny tsena Espaniôla. Ho fanampin'ny fananana safidy podcast marobe amin'ny fampiharana, dia azontsika atao ny mihaino ny onjam-peo mivantana. Manome antsika ny mety hisian'ny fehezo ny hafainganan'ny feo sy ny feony amin'ny fotoana rehetra. Averina indray fa ny zava-drehetra nokarakarain'ny sokajy noho izany dia mora ho antsika ny mahita programa manokana.
La maimaim-poana ny fampidinana ny app Android. Na izany aza, manana fividianana ao anatiny isika.
Podcast & Radio iVoox - Henoy ary sintomy maimaim-poana
Ity fampiharana ity dia heverin'ny maro ho ny tsara indrindra azontsika jerena eny an-tsena anio. Izy io dia manana endrika tsara, Material Design, izay mampahazo aina azy tokoa ny fampiasana azy. Ho fanampin'izay, ahafahantsika misintona podcast sy manova ny hafainganam-pandehan'ny playback na ny feon'ny feo. Atsipitsikao koa ny fampidirana ireo programa amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay dia mifanaraka amin'ny Android Wear, Android Auto ary Chromecast.
La misintona an'ity fampiharana ity ho an'ny Android dia mitentina 2.99 euro. Na izany aza, ao anatiny dia tsy misy fividianana na dokam-barotra.
Izy io dia rindrambaiko iray izay nanjary nalaza tamin'ny fotoana lasa. Ho fanampin'izay, dia anisan'ny naoty tsara indrindra tamin'ity sokajy ity. Izy io dia manana interface iray tena tsotra, saingy mandaitra sy mora ampiasaina amin'ny mpampiasa. Manana ny safidintsika isika misintona fizarana na mijery ireo podcast malaza indrindra. Toy ny hafa, afaka manova ny hafainganam-pandehan'ny playback isika. Manana ny zavatra rehetra voarindra amin'ny sokajy ihany koa izahay.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza izahay.
Izy io dia fampiharana izay Google dia tafiditra ho iray amin'ireo tsara indrindra tamin'ny 2017. Ho fanampin'izay dia ao amin'ny lisitry ny fampiharana amin'izao fotoana izao izay eken'ny ekipan'ny Google Play ho sintonina. Ka izany dia misy antoka azo antoka. Misongadina ambonin'ny zava-drehetra izy noho ny interface, tena tsotra sy madio. Zavatra manamora ny fitetezana ny rindranasa. Ho fanampin'izay, ny zava-drehetra dia voalamina isaky ny sokajy.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na izany aza, mahita mividy ao anatiny isika.
Castbox - Podcast maimaim-poana voalohany
Ity no safidinay miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra hihainoana podcast amin'ny Android izay mety ho hitantsika anio. Izy rehetra dia miavaka amin'ny fananana asa fanampiny maro izay mahaliana azy ireo. Miaraka amina endrika tsara. Iza amin'ireo rindranasa ireo no heverinao fa tsara indrindra? Mampiasa ny iray amin'izy ireo ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra hihainoana podcast amin'ny Android
Ny tetika Spotify tsara indrindra amin'ny Android
GFXBench dia manambara ny antsipiriany TCL 5099